I-Netherlands Manje Ingena Kukhiye Kanzima ngoKhisimusi
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseNetherlands » I-Netherlands Manje Ingena Kukhiye Kanzima ngoKhisimusi
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Izindaba zaseNetherlands • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Isithombe sihlonishwa ngu-Ernesto Velázquez wase-Pixabay
I-Omicron ibangele ukwanda okungama-25% kwezinga lamacala amasha e-Amsterdam, eNetherlands. Ephendula, uhulumeni uvala yonke into. UNdunankulu uMark Rutte ubiza imingcele ngokuthi “ayinakugwenywa.”
Emibuthanweni kaKhisimusi, ngeshwa lokhu akusho ukuthi izihambeli ezingaphezulu kwezi-4 ezineminyaka engaphezu kuka-13 umndeni ngamunye kusukela ngo-December 24-26 kanye nangobusuku bangaphambi kukaNcibijane. Kusukela kusasa, ngeSonto, Disemba 19, 2021, inani eliphakeme lezivakashi zasendlini ngu-2.
UNdunankulu uRutte uthe: “Ukukufingqa ngomusho owodwa, iNetherlands izobuyela ekuvaleni kusukela kusasa. Ngimi lapha kulobubusuku ngidangele. Futhi abantu abaningi ababukele bazozizwa ngaleyo ndlela, nabo. ”
Zonke izikole manje zivaliwe futhi zizohlala zikhona kuze kube okungenani uJanuwari 9, 2022. Ezinye izindlela zokuvala isikole zizoqhubeka zisebenza kuze kube okungenani uJanuwari 14.
Imithetho emisha ikhuthaza abantu ukuthi bahlale ekhaya. UNdunankulu uthe ukwehluleka ukwenza okuthile manje kungaholela “esimeni esingalawuleki ezibhedlela.”
Naphezu kwezikhathi zokufika ekhaya ezabekwa ezindaweni zokungenisa izihambi nezamasiko eNetherlands emasontweni ambalwa edlule emzamweni wokunciphisa imiphumela ye-Omicron, okusulelana kakhulu kuyaqhubeka nokusabalala njengomlilo wequbula. Sekubikwe amacala angaphezu kwezigidi ezingama-2.9 e-coronavirus ezweni kusukela ubhubhane lwaqala nokufa kwabantu abangaphezu kuka-20,000.
Izikhulu zaseNetherland zinxusa abantu ukuthi bagonywe.
Kwamanye Amazwe AseYurophu
Izinyathelo ezintsha zimenyezelwa eFrance, eJalimane naseRiphabhulikhi yase-Ireland ukuzama ukunqanda imiphumela ye-Omicron.
UNdunankulu waseFrance uJean Castex uthe okuhlukile kwe-Omicron "kusabalala ngesivinini sombani." Ukuphendula, iFrance ibeke imingcele eqinile yokuhamba kulabo abangena besuka e-United Kingdom - okuyizwe elithinteke kakhulu esifundeni, njengoba amacala acishe abe ngu-25,000 aqinisekisiwe e-Omicron kuphela ngoMgqibelo.
Izibalo zakamuva ze-EU zikhombisa ukuthi i-Europe isivele ibone amacala angaphezu kwezigidi ezingama-89 nokufa okuhlobene ne-COVID-1.5 million.
Kusukela namuhla, kube namacala ayi-271,963,258 aqinisekisiwe e-COVID-19, okuhlanganisa nokufa kwabantu abayi-5,331,019, njengoba kubikwe I-World Health Organization (WHO).
Funda kabanzi mayelana no Omicron